आखिर किन करिना कपूर आफ्ना छोराहरुलाई फिल्म स्टार बनाउन चाहन्निन ? बाबु सेफ के भन्छन ? – हाम्रो देश
११ असोज २०७८, सोमवार Monday, 27 September, 2021
आखिर किन करिना कपूर आफ्ना छोराहरुलाई फिल्म स्टार बनाउन चाहन्निन ? बाबु सेफ के भन्छन ?
३१ साउन २०७८
एजेन्सी । करीना कपुर खान आफ्नो करियर को लागी व्यक्तिगत जीवन को लागी चर्चामा रहन्छिन्। करीनाका दुई छोरा छन् र उनीहरुको दुबै गर्भावस्था देखि नै धेरै चर्चा भएको थियो। अब करीना कपूर खानले आफ्ना छोराहरु तैमुर र जहाँगीर को बारे मा एचटी ब्रन्च संग उनीहरुको भविष्यका बारेमा बोलेकी छन् ।
छोराहरुको बारेमा कुरा गर्दै करीनाले भनिन्, ुउनी अहिले केही महिनाको मात्र भएका छन् तर जेह म जस्तै देखिन्छन् र टिम (तैमूर) सैफ जस्तै देखिन्छन्। टिम छ महिनाको उमेरमा नयाँ अनुहार देख्ने बानी थिएन, तर जेह यो संग सहज छ।
उनले अगाडि भनिन्, ुतैमूर प्राय सैफ को व्यक्तित्व छ र जाह सबै को एक धेरै राम्रो मिश्रण छ। टिम एक विशिष्ट धनु राशिका हुन् । उनी रचनात्मक छन् उनी कला मन पराउँछन्, उनी रंग र चित्रकला मन पराउँछन्। उनी चीजहरु अन्वेषण गर्न मन पराउछन् सबै कुरा को बारे मा जान्न चाहान्छन्। जाह मीन राशिका हुन् । हेरौं ऊ कसरी बन्छ जब ऊ ठूलो हुन्छ।
करीनाले २०१६ मा पहिलो पटक गर्भावस्थामा काम गरेकी थिइन्। गर्भावस्थाको आठौं महिना चलिरहेको थियो। उनी यस्तो गर्ने पहिलो बलिउड अभिनेत्री थिइन्। करीनाले दुबै गर्भावस्थामा काम गरिसकेकी छिन्। उनले विज्ञापनको साथ आफ्नो शो को लागी शूटिंग गरेका छन्।
करीनाले यसबारे भनिन्, ुजब मँ जेहसँग पाँच महिनाको गर्भवती थिएँ, मैले आमिर खानसँग फिल्म लाल सिंह चड्ढाको लागि एउटा रोमान्टिक गीत पनि खिचेको थिएँ।ु यस पछि, करीना कपूर खानले बताइन् कि उनी कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई आफ्ना छोराहरु बनाउन चाहन्छन्।
यस अघि पनि करिना र सैफकाबीचमा बच्चाहरुको भविष्यका बारेमा विवाद भएको कुरा बाहिर आएको थियो । सैफ आफ्ना जेठो छोरा तैमुरलाई एक विज्ञापनमा खेलाउन चाहन्थे तर करिना छोरालाई सार्वजनिक गर्न चाहन्नथिन् । जसका कारण उनीहरुबीच विवाद भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
चर्चामा बटुल्दै विष्णु माझीको ‘चरी जेलैमा’ (भिडियोसहित)
hamro des 1 महिना अगाडि
खगेन्द्र र रोजिनालाई पुत्री लाभ
राष्ट्रकवि पत्नीले पाइनन् भत्ता
विवादित बन्दै पुष्प र जिसुको ‘हेर्ने हो र देखाइदिम’ गीत
ऋचाले छाडेपछि ‘कमेडी च्याम्पियन २’मा निर्णायक को ?
बलिउड अभिनेत्री शिल्पा र उनकी आमा सुनन्दामाथि करोडौं ठगीको आरोप